Uyenza njani uluhlu lokudlala kwiYouTube ulator Emulator.online ▷ 🥇
I-YouTube ngokungathandabuzekiyo yindawo yokwabelana ngevidiyo ngokubalaseleyo. Ukusukela ekusekweni kwayo, kunyaka wezobuchwephesha okude 2005, iguqule indlela yethu yokuqonda i-Intanethi. Namhlanje i-YouTube iyafana neevidiyo zazo zonke iintlobo: ukusuka kuvavanyo, kwizifundo, kwiividiyo zomculo, kwiitreyila zemidlalo bhanyabhanya kunye nevidiyo ekhutshwa kunye nokuphela ngeepodcast. Ngamafutshane, kwi-YouTube kulula ukufumana iividiyo zomdla wethu, kuzo zonke izinto esizithandayo.
Ukubabona kakuhle, siza kubona kweli nqaku, ukwenza uluhlu lokudlala, apho unokuqikelela ngokulula kwigama, ayikho enye ngaphandle komnye uluhlu lokudlala, kwimeko yethu yeevidiyo eziza kudlalwa ngokuzenzekelayo zilandelelana. Ixesha sele liqhelekile kwabo benze uluhlu lwadlalwayo ngeengoma zabo mp3 okanye kwabo banento yokwenza neSpotify.
Ukuba uchukunyiswe ngokukodwa yividiyo kuluhlu lwakho lokudlala, ndikwacebisa ukuba ujonge inqaku lethu esiza kuchaza indlela yokukhuphela iividiyo zeYouTube.
Yenza uluhlu lokudlala lweYouTube kwiPC yakho
Nokuba yeyiphi na iimfuno zakho, ukwenza uluhlu lokudlala kwi-YouTube ilula kakhulu, landela nje amanyathelo adweliswe apha ngezantsi:
yiya kwindawo ye-YouTube kwi-PC okanye kwi-Mac;
emva koko ungene ngeakhawunti yakho kaGoogle;
fumana ividiyo ofuna ukuyongeza kuluhlu lwakho lokudlala;
ngezantsi kwevidiyo, cofa iqhosha "Gcina";
imenyu iya kuvulwa apho ungakhetha ukufaka imovie kuluhlu lokudlala ngokuzenzekelayo "Jonga kamva", Okanye kolunye uluhlu lokudlala esele lwenziwe;
Kwimenyu efanayo, unokwenza uluhlu lokudlala olutsha ngokunqakraza ku "Yenza uluhlu lokudlala olutsha";
izakuvela ngezantsi kweminye imihlaba emibini, ethi "igama"Kwaye lowo uzinikezele kukhetho lwabucala onokukhetha kulo uluhlu lokudlala ("I-Privado","Ayidweliswanga", E"Shicilela");
okwangoku ungacinezela "Yakha"Kwaye uqalise ukongeza iiklip kuyo.
Ukufikelela, ukumamela, okanye ukuhlela uluhlu lokudlalacinezela nje u "Ingqokelela"Kwiphepha eligcweleyo uza kufumana lonke uluhlu lwethu lokudlala, apha cofa nje kwenye yomdla wethu ukuze sikwazi ukuyiguqula. Kwabo bayazibuza, ndiyakhumbula ukuba idilesi yoluhlu lwethu lokudlala iphezulu kwiphepha ibha yedilesi yesikhangeli Idilesi iluncedo kakhulu ekwabelaneni ngokukhawuleza uluhlu lokudlala.
Kwakhona, kukho indlela ekhawulezayo yokongeza iividiyo kuluhlu lwethu lokudlala nokuba ngqo kuluhlu lweziphumo zokukhangela, okanye umane ujika phezu kwevidiyo yomdla, uya kubona iqhosha elinamachaphaza amathathu abekwe nkqo ecaleni kwegama levidiyo. Ngokucofa kuyo ngempuku, unokukhetha into "Gcina kuluhlu lokudlala".
Yenza uluhlu lokudlala kuhlelo lokusebenza lweYouTube kwii-smartphones nakwiitafile
Ukwenza uluhlu lokudlala kwisixhobo esiphathwayo kufana kakhulu nokwenza uluhlu lokudlala kwikhompyuter yedesktop, kufuneka:
vula usetyenziso lweYouTube kwisixhobo sakho;
ukufikelela kuzenzekelayo, ukuba uneakhawunti ezininzi zikaGoogle, usetyenziso luya kukubuza ukuba yeyiphi okhetha ukuyisebenzisa;
Okwangoku, kuya kufuneka ufumane ividiyo onomdla kuyo. Ngaphantsi kwepaneli yokudlala kukho "Gcina";
ukuba ucinezela kwaye ubambe iqhosha, iscreen esifana nesikwisikrini siza kuvela, apho unokukhetha ukufaka ikliphu kuluhlu olwenziwe ngaphambili okanye apho ungakhetha khona ukwenza entsha;
kule meko, cofa phezulu "Uluhlu lokudlala olutsha";
xa ucinezelwe kuya kufuneka ufake igama loluhlu lwevidiyo kunye noseto lwangasese ("I-Privado","Ayidweliswanga", E"Shicilela");
Nje ukuba senze uluhlu lwethu lokudlala siya kuba sikulungele ukufaka zonke iividiyo esizithandayo.
Indlela ekhawulezayo yokongeza iividiyo kuluhlu lwethu lokudlala ngokuthe ngqo kuluhlu lweziphumo zophando kukucofa iqhosha elinamachaphaza amathathu abekwe nkqo ecaleni kwegama levidiyo kwaye ukhethe into leyo "Gcina kuluhlu lokudlala".
Ukufikelela kwiscreen esinoluhlu lwakho lokudlala, mhlawumbi ukuhlela okanye ukwabelana ngazo, ezantsi kwe-YouTube app, cofa nje iqhosha "iqhosha.Ingqokelela".
Useto lwabucala: Bucala, aludweliswanga mi Shicilela ngokweenkcukacha
Zombini uluhlu lwadlalwayo kunye neevidiyo zinokuba namanqanaba amathathu okubonakala kwiYouTube., siyazenza nzulu ukuze uhlale usazi ukuba ukhetha eyiphi:
I-Privado, Olu lukhetho olulula kuzo zonke, apho uluhlu lokudlala luya kufumaneka kuphela kuwe odale uluhlu lokudlala. Uluhlu lokudlala aluyi kuvela nakuphi na ukukhangela komsebenzisi.
Ayidweliswanga, lukhetho oluphakathi, apho uluhlu lokudlala luya kubonakala kuphela kwabo banekhonkco, ngenxa yoko kuya kufuneka unikeze ikhonkco loluhlu lokudlalwayo olwenzileyo kwabo banomdla.
umphakathi, olu lukhetho olulula kakhulu ukuluqonda, apho uluhlu lokudlalayo luya kufikeleleka ngumsebenzisi ngamnye ngokhangelo kunye nekhonkco ngqo.
UPassei Direto: usisebenzisa njani isicelo sokufunda kwi-Intanethi?
Spotify Web: Mamela umculo simahla ngaphandle kwentengiso
Uyenza njani i-avatar yakho kwi-Facebook
Inkqubo ye-Android WebView: yintoni le nto? Ngaba ingasuswa?
Iincwadi ezimanyelwayo: ukhuphelo simahla lweencwadi zomsindo zase-Itali nakwamanye amazwe
Ujonga njani ukuba i-Instagram iphantsi okanye ayinakufikeleleka
Eyonaapps ilungileyo yokumamela kwiincwadi ezimanyelwayo
Ungazikhuphela njani iividiyo kwaye uziguqule ngesikhupheli seVidiyo seYTD
Owona mdlali u-IPTV ukuba abukele i-IPTV ngokulula
Ungazidlulisa njani izingxoxo zeWhatsApp ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iOS
Uyikhawulezisa njani i-Android: iindlela ezisebenzayo!
Ukuthandana kuFacebook: ukuthandana nabahlobo abatsha
Gcina indoda encinci ... ngempuku!